सुष्मिताले गरिन् १६ बर्ष कान्छा रोहमानसँग प्रेम,इन्स्टाग्राममा एउटा यस्तो कारणले। …. – News Nepali Dainik
सुष्मिताले गरिन् १६ बर्ष कान्छा रोहमानसँग प्रेम,इन्स्टाग्राममा एउटा यस्तो कारणले। ….
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १४, २०७७ समय: १०:३१:२२
काठमाडौं । मिस युनिभर्स समेत बनेकी सुष्मिता सेन लामो समयदेखि रोहमान शालसँग सम्बन्धमा छिन् । दुबैले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो सम्बन्ध स्वीकारेका छन्। ११ जनालाई ***डेट गरिसकेकी सुष्मिता अहिले भने आफूभन्दा १६ वर्ष कान्छा रोहमनसँग डेटमा छिन् । सुष्मिताको भाइ राजीव सेन र चारु आसोपाको विवाहमा यो जोडी एकसाथ देखिएका थिए।
सुष्मिता रोहमानको काखमा पल्टिरहेकी तस्वीर शेयर ***गर्न्छिन्। सुष्मितासँगै दुबै छोरी रेने र अलिशा पनि प्राय देखिन्छन्। सुष्मिता र रोहमानबीच १६ बर्षको उमेर फरक छ। सुष्मिताले एक प्रेम अन्तर्वार्तामा उनको प्रेमकथा बताएकी थिइन् । सुष्मिता भन्छिन्, ‘रोहमानले उनलाई इन्स्टाग्राममा एक प्रशंसक जस्तो व्यक्तिगत सन्देश पठाएका थिए।’ यसपछि, ती दुबैको प्रेम कहानी शुरू भयो।
एक प्रश्नले बदलियो ****सुष्मिता सेनको भाग्य
१९९४ मा सुष्मिताले फेमिना मिस इण्डियाको उपाधि जितिन्। उहि वर्षमा उनी मिस युनिभर्स चुनिएकी थिइन्। त्यस समयमा उनको उमेर १८ वर्षको मात्र थियो । सुष्मिताले मिस युनिभर्सको उपाधि ***जित्न लामो यात्रा गर्नुपर्‍यो।
मिस इण्डियाको अन्तिम राउन्डमा सुष्मिता र ऐश्वर्याबीच टाई भएको थियो । सबै त्यस समय कसको शिरमा मिस इण्डियाको मुकुट हुनेछ सोचमइमा थिए। जजले दुबैलाई ९.३ नम्बर दिएका थिए। यसपछि उनीहरूलाई एक-एक प्रश्न सोध्ने निर्णय गरियो, जसको उत्तर राम्रो हुनेछ उसैले मिस इण्डियाको उपाधि पाउने बताइयो।
यसपछि न्यायाधीशले ऐश्वर्या रायलाई प्रश्न सोधे, **‘तपाई आफ्नो श्रीमानमा के खुबवी देख्न चाहनुहुन्छ? बोल्ड र सुन्दर रिज फोरस्टर वा मैसन क्यापवेल जस्तो।’ रिज फोरस्टर र मैसन क्यापवेल दुबै हलिउड सिरिजका क्यारेक्टरहरु हुन्।
अब सुष्मिता सेनसँग प्रश्न गर्ने पालो थियो। सुशलाई सोधिएको थियो, ‘तपाईलाई आफ्नो देशको टेक्सटाईल विरासतको बारेमा के थाहा छ? यो कहिले सुरु भयो? तपाई के लगाउन चाहानुहुन्छ? ‘
Last Updated on: January 27th, 2021 at 10:31 am
१८ बर्षेकी युवतीको रहस्यमय मृत्यु, आफ्नै मिल्ने साथीले खोलिन यस्तो ड रलाग्दो रहस्य, (भिडियो सहित)